- | वर्षमान पुन अनन्त, नेता, माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रले पाँचवटा एजेन्डा राखेर राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो । गत वैशाख तेस्रो साता यस्तै पहल गरिरहेका बेला सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच लिखित ९ र भद्र भनिएको ३ बुँदे सहमतिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको थियो । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनको वातावरण निर्माण, पुनः निर्माण, राहात र पुनस्र्थापना, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र सम्भावित प्रतिगमन रोक्ने कार्यसूची सहित मओवादीले फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेन्डा अगाडि बढाएको छ । यसले एमाले र माओवादीबीचको दूरी बढाएको छ । के यो गठबन्धन भत्किँदै छ ? सहमतिको सरकार बनाउन भन्दै नयाँ गठबन्धनको गृहकार्यमा लागेका माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तसँग रातोपाटीका लागि नेत्र पन्थी र नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको अंश ।
अहिले एमालेसँगको हाम्रो गठबन्धनमा खटपट आएको छ । जे अपेक्षाले गठबन्धन बनाइएको हो त्यो अनुरुप गठबन्धनले काम गरेको छैन । त्यसअर्थमा यसलाई बुझ्दा राम्रो होला ।
के विषयमा खटपट परेको हो ? पार्टीभित्रै यो गठबन्धन भत्काउने र बचाउन खोज्ने पनि छन् नि ।
त्यस्तो छैन । पार्टी कार्यालय र पोलिटब्युरोको निर्णय भनेको पाँचवटा एजेन्डामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम, संविधान कार्यान्वयनको काम, मधेस, जनजाति लगायतका मागको सम्बोधन गर्ने, भूकम्पले पारेको प्रभाव त्यसको पुनर्निर्माणलाई तदारुकताका साथ राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने र राम्रो अवस्था बनाएर स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म तीनैवटा निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्ने । यी सबै सकेपछि जनयुद्ध, जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु जो संस्थागत भएका छन् तिनलाई दिगो बनाउने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने यत्ति नै एजेन्डा हुन् । यसैका लागि हामीले एमालेसँग गठबन्धन गरेका हौँ । आज खटपट पनि यसैमा हो । शान्ति प्रक्रियामा कहिले गोरखा मुद्दा आउँछ, कहिले ओखलढुङ्गा मुद्दा आउँछ, कहिले अस्टे«लियाको मुद्दा आउँछ त कहिले यूके मुद्दा आउँछ । यी मुद्दामा एमालेका नेता कार्यकर्ता, मानवअधिकारकर्मी र वकिल जोडिएर आउँछन् । अनि अदालतमा केही हुन्छ ।
केपी ओलीजीको त सिंहदरबारमा फोटो पनि नझुण्डिने भइसकेको थियो, यसलाई अप्रिय रुपले भन्दा । त्यो फोटो झुण्ड्याउने व्यवस्था हामीले ग-यौँ, काँध थाप्यौँ । अनि आज त उहाँ मानौँ दुई तिहाई ल्याएर आफै सिंहदरबारमा पुगेको जस्तो गर्नुभएको छ । यो दुनिया उहाँले नै चलाएको जस्तो ठान्नुभएको छ । हामीले एकैछिन काँध छोडेको दिन कहाँ झर्नु हुन्छ ? भोलि हुनुपर्ने कहाँ हो ?
नीति निर्माणमा माओवादी कहीँ देखिन्छ कि, कहीँ हावी हुन्छ कि भनेर जति बदनाम गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले सहकार्य हुन सक्दैन । एमालेले आफ्नो निर्णय गर्छ, माओवादीले आफ्नो निर्णय गर्छ । कुरा त सफा छ ।
उहाँहरुको सकेसम्म एमालेसँग नबस्ने, एमालेको सकेसम्म काङ्ग्रेससँग नबस्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । यो त काङ्ग्रेस र एमालेको पोजिसन न हो । देशको पोजिसन के हो भने मुख्य तीन पार्टी मिलेर मधेसको समस्या समाधान गर्ने, १८ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन सक्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने भन्ने हो ।
पहिला ७२ घण्टामा निर्णय फेर्नुमा पनि त साँचोको भूमिका होला नि ?